शिक्षा जब | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
शिक्षा र अन्य शिक्षा जब बारे पत्ता
शिक्षा सिक्ने अर्थ. जब तपाईं शिक्षा जब मा काम, तपाईं मान्छे एक तरिका वा अर्को मा सिक्न मदत गर्नेछ.
अमेरिका मा, सबै छोराछोरी स्कूल जाने गर्नुपर्छ. त्यसैले स्कूल सिस्टम ठूलो छ, र धेरै शिक्षा जब भर्न छन्. धेरै विश्वविद्यालयहरु पनि छन्, कलेज, र प्रशिक्षण केन्द्र. यी सबै शिक्षा क्षेत्रमा जब प्रस्ताव.
तपाईं शिक्षा काम प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं शायद सिकाउन चाहनुहुन्छ. तपाईं यो पृष्ठ तल टाढा शिक्षक बन्ने कदम पाउनुहुनेछ. तर अन्य शिक्षा जब र करियर स्कूल कक्षा परे छन्. यहाँ तिनीहरूलाई केही छन् - ती सबै भन्दा एक डिग्री आवश्यक:
लाइब्रेरियन - कलेज मा librarians, विद्यालय र अन्य पुस्तकालयहरु पुस्तकहरू संगठित, पत्रिकाहरू, र पत्रिका, र कम्प्युटर डाटा. यो पढ्न प्रेम गर्ने मान्छे को लागि राम्रो काम छ.
निर्देशन सल्लाहकार - एक स्कूल निर्देशन सल्लाहकार विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक संग ट्रयाक मा रहन मद्दत गर्छ र कौशल सुधार गर्न मद्दत गर्छ. जो मदत बच्चाहरु मन तर सिकाउन चाहँदैनन् मान्छे को लागि एक राम्रो काम.
स्कूल सम्पर्क - एक स्कूल सम्पर्क अधिकारी आमाबाबुले राख्छ, विद्यार्थी, र शिक्षकहरू जडान र सँगै काम. तपाईं आफ्नो समुदाय मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने यो राम्रो काम हुनेछ. एक स्कूल सम्पर्क कसरी हुन सिक्न
ESL शिक्षक - ESL "दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी" को लागि खडा छ. एक ESL शिक्षक छन् मूल वक्ता छैन विद्यार्थीहरूलाई अंग्रेजी सिकाउँछ.
शिक्षण सहायक - पनि शिक्षकको सहयोगी भनिन्छ, एक शिक्षण सहायक कक्षाकोठाबाट र समर्थन विद्यार्थी शिक्षकहरू मदत गर्छ. एक डिग्री बिना कसैले लागि राम्रो काम. एक शिक्षण सहायक कसरी हुन सिक्न
विकल्प शिक्षक - एक विकल्प शिक्षक अनुपस्थित छ जो एक शिक्षक लागि कदम. तपाईं शिक्षक प्रमाणीकरण छैन भने वा तपाईं एक काम गर्न पूर्ण-समय प्रतिबद्धता चाहनुहुन्छ भने यो एक राम्रो काम छ. तपाईं छोटो सूचना मा काम गर्न उपलब्ध गर्न आवश्यक हुनेछ.
कला शिक्षक - कला शिक्षकहरू हरेक तहमा कलात्मक कौशल र कला इतिहास सिकाउन. तिनीहरूले विद्यार्थी कलात्मक प्रतिभा विकास र आफूलाई व्यक्त गर्न मद्दत. तपाईं एउटा कलाकार हो तर कला मार्फत जीवित कमाउन सक्दैन भने यो तपाईं को लागि राम्रो काम छ.
कलेज प्रोफेसर - कलेज प्राध्यापकहरू कमाउन डिग्री भएका विद्यार्थी सिकाउन. ठूलो ज्ञान छ र अत्यधिक आफ्नो क्षेत्रमा योग्य छ जो एक व्यक्ति लागि यो काम, जो प्राचीन ग्रीस देखि प्रविधि केहि हुन सक्छ.
तपाईं बरु सार्वजनिक विद्यालयमा नियमित शिक्षक हुनेछ? यसलाई सही व्यक्ति को लागि एक धेरै राम्रो विकल्प छ. त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा शिक्षकहरूको कमी छ. तपाईंले एक योग्य शिक्षक छन् भने, तपाईं सजिलै काम पाउनुहुनेछ.
शिक्षा मेरो लागि सही काम छ?
शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं आफ्नो समुदाय र आफ्नो देश को भविष्य योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने शिक्षा जब राम्रो क्यारियर विकल्प हो. तर केही शिक्षा जब रूपमा उच्च व्यापार मा जब रूपमा तिर्ने छन्. यदि धेरै मुद्रा बनाउन तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण छ, त्यसपछि शिक्षा तपाईं लागि सही हुन सक्छ.
शिक्षण बहिर्गमन मान्छे को लागि राम्रो काम छ. यो समस्या एक समूह अगाडि बोल्ने भएका मान्छे को लागि राम्रो काम छैन.
शिक्षा शरणार्थी बारे एक भिडियो हेर्न
भिडियो विशेषताहरु Mandy म्यानिङ, यस वर्षको राष्ट्रिय शिक्षक 2018
तपाईं एक स्कूल शिक्षक हुन चाहनुहुन्छ भने, सुरु गर्न राम्रो स्थान आफ्नो राज्य मा शिक्षा विभाग छ. राज्यहरु शिक्षकहरू प्रमाणित किनभने यो छ, र हरेक राज्य 'आवश्यकताहरु फरक छन्.
शिक्षा को आफ्नो राज्य विभाग फेला
यहाँ एक सार्वजनिक विद्यालय शिक्षक बन्नको लागि कदम हो:
एक स्नातक गरेको डिग्री कमाउन
तपाईं जवान छोराछोरीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ भने, प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा मा एक डिग्री राम्रो छ. तपाईं पुरानो बच्चाहरु सिकाउन चाहनुहुन्छ भने, विचार के विषय तपाईं सिकाउन चाहनुहुन्छ – जस्तै, गणित - र तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो डिग्री हुनेछ.
एक शिक्षण डिग्री कसरी कमाउने
विद्यार्थी शिक्षक बन्न
सबैभन्दा अमेरिका तपाईं शिक्षक बन्न अघि विद्यार्थी शिक्षक हुन आवश्यक. अभ्यास एक वा दुई semesters लागि नजिकै एक स्कूल सिकाउन हुनेछ.
शिक्षालाई परीक्षा लिन
सबैभन्दा अमेरिका शिक्षकहरू लागि Praxis परीक्षा पास गर्न आवश्यक
PRAXIS बारेमा जान्न
आफ्नो शिक्षालाई प्रमाणपत्र प्राप्त
राज्य द्वारा शिक्षक आवश्यकताहरु फेला
के म एउटा स्कूलमा सिकाउन चाहनुहुन्छ भने?
तपाईं कार्यालय कौशल छ भने, तपाईं एक डिग्री बिना विद्यालय वा कलेज कार्यालयमा शिक्षा जब लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ. पछि, तपाईं आफ्नो क्यारियर अघि बढाउन मद्दत गर्न सार्वजनिक प्रशासन केही प्रशिक्षण प्राप्त गर्न सक्छन्. सार्वजनिक प्रशासन मा एक क्यारियर बारेमा थप जान्न
सदुपयोग गर्न आफ्नो भाषा कौशल राख्न – newcomers गर्न अंग्रेजी सिकाउन सुरु. तपाईंले भुक्तानी काम पाउन एक Els प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न सक्छन्, वा तपाईंले आफ्नो स्थानीय resettlement एजेन्सी वा वयस्क शिक्षा केन्द्र मा स्वयंसेवक गर्न सक्नुहुन्छ. ESL अनलाइन पाठ्यक्रम बारेमा जान्न
परामर्श को Accreditation र सम्बन्धित शिक्षा कार्यक्रम को लागि परिषद - एक सल्लाहकार बन्न (CACREP) स्कूल सल्लाहकार certifies. परामर्श जब बारेमा थप जान्न र तपाईं नजिकै एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम फेला
Upwardly विश्व काम-अधिकार आप्रवासी मद्दत गर्छ, शरणार्थी, asylees, र विशेष आप्रवासी भिषा धारकों (SIVs) संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो व्यावसायिक करियर पुनः सुरु.
Learnersegdeinc.com थप प्रमाणहरू पाउन चाहने योग्य शिक्षकहरू लागि वेबसाइट.
तपाईं गर्नुपर्छ एक नागरिक बन्न?
प्रयोग teach.org शिक्षक बन्ने कदम मद्दत गर्न
तपाईं एक डिग्री छैन भने, तपाईं अझै पनि विद्यालय वा कलेज मा काम पाउन सक्नुहुन्छ. सरकार रोजगार केन्द्र निःशुल्क सल्लाह प्रस्ताव र स्थानीय जब सूची राख्न. तिनीहरूले रिजुमेहरू र काम आवेदन मद्दत. फेला आफ्नो निकटतम रोजगार केन्द्र
Schoolspring.com शिक्षा क्षेत्रमा लागि जब वेबसाइट.
शिक्षा को क्षेत्र मा बारेमा जब थप जान्न
स्पटलाइट: Eklas अहमद, पोर्टल्याण्ड मा एक शिक्षक भइन् सुडान देखि शरणार्थी, Maine - हेर्न Eklas एक अद्भुत आश्चर्य प्राप्त!